Pyae Phyo (MMiTD): တန်ဆောင်တိုင် အထူး Smartphone Promotion (NIPDA ယိုးဒယားဟန်းဆတ်)(13.11.2016မှ18.10.2016ထိ)
တန်ဆောင်တိုင် အထူး Smartphone Promotion (NIPDA ယိုးဒယားဟန်းဆတ်)(13.11.2016မှ18.10.2016ထိ)
တန်ဆောင်တိုင် အထူး Handset Promotion လေးချပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ၀ယ်ယူသူများအနေဖြင့်
လက်ဆောင်တွေအများကြီးဖြင့် ၀ယ်ယူရနိုင်ပါတယ် လာဝယ်ရင်းလည်းရသလို လာမ၀ယ်ရင်လည်း
အိမ်တိုင်ယာရောက် လိုက်ပို့ပေးနေပါပြီ ပို့ဆောင်ခပေးစရာမလိုဘူး လာပို့တဲ့အခါ ကံစမ်းမဲနိူက်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာအသေးစိတ်ကြည့်လိုက်နော်။
CPU =MTK 6580 Quad Core
Camera=back 8.0 and font 5.0
ဒီ ဟန်းဆတ်လေးဆိုလည်း အပြင်မှာ လူတော်တော်များများကြိုက်ပါတယ် ပုံစံအနေထားကတော့လေး
ထောင့်ကျပြီး Camera ဘေးဘက်မှာဖြစ်ပြီး Font 5.0 MP ဖြစ်ပြီး Back Camera ကတော့ 8MP ဖြစ်ပါတယ် အရှည်ကတော့ ၆လက်မဖြစ်ပြီး Super AMoLED သုံးထားပြီး Touch ပိုင်းကလည်း
ချောမွေ့မြန်ဆန်တဲ့ ခံစားချက်ကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် Video Call ခေါ်ရာမှာလည်းစိတ်ကျေနပ်စေမှာအမှန်ပါပဲ Smart Motion မှားပါတဲ့အတွက် ပါဝါခလုပ်သုံးစရာမလိုဘဲ Double Touch ဆို ပါဝါပွင့်တာ C ဆိုဖုန်းပွင့်တာ အစရှိသဖြင့် Fuction များပါဝင်ပြီး မှန်ပေါ်ထိလိုက်တာနဲ့ အသဲပုံလေးတွေပွင့်တာ ဆိုတဲ့ မြင်ကွင်းလေးရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်
Dual SIM -Dual 3G သုံးနိုင်ပြီး Internet အပိုငးမှာလည်း H+ တတ်ပါတယ် ခင်ဗျာ လိုင်းစွဲအားလည်းကောင်းမွန်သလို အကြမ်းလည်းခံပါတယ် ကျွန်တော်ဆို ခဏခဏပြုတ်ကျတာဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူးခင်ဗျ
အာမခံအပိုင်းမှာလည်း Handset မှာအာမခံတစ်နှစ်ပါပါတယ် ၀ယ်ယူချိန်ကစပြီးတစ်လအတွင်း ဖုန်းအတွင်း
ပိုင်း Error တတ်ခဲ့လျင် အသစ်ချိန်းပေးတာမျိူးတွေ ၀ယ်သူစိတ်ကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးတာမျိူးတွေ ဆွေသဟာMobile မှလုပ်ပေးပါတယ် အကြမ်းခံရမယ် စိတ်ဆင်းရဲတာမျိူးမဖြစ်စေရဘူး ပူတာမျိူးဟန်းတာမျိူးဘက်ထရီအကုန်မြန်တာမျိူးတွေလည်းမဖြစ်စေရဘူး လို့ ဆွေသဟာက အာမခံပေးထားပြန်ပါတယ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သုံးထားတာမျိူးဖြစ်လို့ အခုချိန်တော့အာမခံပေးထားတယ်နော်
အားနည်းချက်ဆိုတာလည်း ဘာကိုထောက်ပြရမှာလဲတောင်မသိနိုင်တာ ရှိပါတယ် ကျွန်တော်အလကားမပေးနိုင်တာပါ ဟိဟိ
ဟုတ်ပါတယ် ဟန်းဆတ်ဝယ်ပြီဆိုရင် ဆွေသဟာMobile ကနေပြီးတော့ အကိုအမညီမရောင်းရင်းတို့ကို
၁။လိုအပ်တဲ့ Software App အပြည့်အစုံ
၂။SIM Card ,Phone Bill ,Internet လျောက်ပြီးသား,အာမခံ 6လပါတဲ့ Power Bank,အာမခံတစ်သက်တာပါတဲ့ Memory 8GB တစ်ကဒ်,Iphone ပါဖတ်တဲ့ Selfie Stick လက်ဆောင်တွေပေးနေပါတယ်
၃။ဆီဆားအစုံ ဖြည်စားရုံနဲ့ ပို့ဆောင်အခမဲ့နဲ့ Facebook ,Wechat,gmail,Viber,Beetalk အစရှိတဲ့ App တွေလည်း လက်ဆောင်ထည့်ပေးတယ်နော်... ဒါကြောင့်တန်တယ်ဝယ်နော်
သူကတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ သူ့က ၅လက်မအရွှယ်အစားပါ ကင်မရာကအလည်တည့်တည့်ရောက်ထားတတော့ အသုံးပြုသူတွေအကြိုက်ပေါ့ Back Camera 8MP သုံထားပါတယ် Font ကတော့ 5MP ပါ Android Version ကတော့ 5.1 ထည့်ပေးထားပါတယ် Internal ကတော့ 8GB ထည့်ပေးထားလို့ Zapya နဲ့ကူးသလောက်မပြည့်ဘူးလေ ထပ်စိုက်ဖို့ 32GB ထိ စိုက်လို့ရလို့ Default Memory ကို SD ကဒ်ကိုထားပြီး ကြိုက်သလောက်ကူးလို့ရပါတယ် ဖိုက်ဘာ ကော်နဲ့လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲ Metal နဲ့လုပ်ထားလို့ သုံးသူများ ကြိုကမယ်ထင်ပါတယ် CPU အပိုင်းမှာလည်း MTK Chipset ကိုသုံးထားလို့ မပူဘူး အားခံတယ် ဂိမ်းတွေလည်းကောင်းကောင်းဆော့လို့ကောင်းမှာ ကြိမ်းသေမှာပါပဲ Motion တွေလည်းပါတော့ Double Touch ဆိုပါဝါပွင့်တာ C ဆိုဖုန်းပွင့်တာလည်း လုပ်လို့ရတယ်နော် ကျန်တဲ့ကလိစရာတွေလည်းကြံသေးတယ်နော့်
အာမခံချက်ကိုတော့ ၁နှစ်ပေးထားပါတယ် ၀ယ်တဲ့အချိန်ကစပြီး ၁လအတွင်း Error တတ်ပါက အလုံးသစ်နဲ့ပြန်ချိန်းပေးရမယ့်အနေထားဆိုအလုံးသစ်နဲ့ပြန်ချိန်းပေးပါတယ် ပစွံည်းပေါသလို ပြင်စင်ချိန်လည်းအမြန်ဆုံးလုပ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျ ၀ယ်မှာလား အခမဲ့အိမ်ထိအိမ်ရောက်လာပို့ပေးတယ်နော့် အဲ့ရောက်မှရှင်းပါ ကံစမ်းမဲနိူက်ခိုင်သေးတယ်နော့်
Iphone 6S+ ပါပဲ Clone မဟုတ်ပါဘူး ဒီဇိုင်းသွားတူနေတာပါ Android 5.1 နဲ့ထုတ်ထားပြီး Screen6လက်မနဲ့ထုတ်ထားပါတယ် Back Camera 8MP သုံထားပါတယ် Font ကတော့ 5MP ပါ Android Version ကတော့ 5.1 ထည့်ပေးထားပါတယ် Internal ကတော့ 8GB ထည့်ပေးထားလို့ Zapya နဲ့ကူးသလောက်မပြည့်ဘူးလေ ထပ်စိုက်ဖို့ 32GB ထိ စိုက်လို့ရလို့ Default Memory ကို SD ကဒ်ကိုထားပြီး ကြိုက်သလောက်ကူးလို့ရပါတယ် CPU အပိုင်းမှာလည်း MTK Chipset ကိုသုံးထားလို့ မပူဘူး အားခံတယ် ဂိမ်းတွေလည်းကောင်းကောင်းဆော့လို့ကောင်းမှာ ကြိမ်းသေမှာပါပဲ Motion တွေလည်းပါတော့ Double Touch ဆိုပါဝါပွင့်တာ C ဆိုဖုန်းပွင့်တာလည်း လုပ်လို့ရတယ်နော် ကျန်တဲ့ကလိစရာတွေလည်းကြံသေးတယ်နော့်
-------------အာမခံချက်ကိုတော့ ၁နှစ်ပေးထားပါတယ် ၀ယ်တဲ့အချိန်ကစပြီး ၁လအတွင်း Error တတ်ပါက အလုံးသစ်နဲ့ပြန်ချိန်းပေးရမယ့်အနေထားဆိုအလုံးသစ်နဲ့ပြန်ချိန်းပေးပါတယ် ပစွံည်းပေါသလို ပြင်စင်ချိန်လည်းအမြန်ဆုံးလုပ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျ ၀ယ်မှာလား အခမဲ့အိမ်ထိအိမ်ရောက်လာပို့ပေးတယ်နော့် အဲ့ရောက်မှရှင်းပါ ကံစမ်းမဲနိူက်ခိုင်သေးတယ်နော့်
7i ကတော့ တော်တော်များများကြိုက်ပါတယ် လေးထောင့်ကျတာရယ်Camera ဘေးဘက်ရောက်တာရယ်
တော်တော်များများကြိုက်ကြပါတယ် ack Camera 8MP သုံထားပါတယ် Font ကတော့ 5MP ပါ Android Version ကတော့ 5.1 ထည့်ပေးထားပါတယ် Internal ကတော့ 8GB ထည့်ပေးထားလို့ Zapya နဲ့ကူးသလောက်မပြည့်ဘူးလေ ထပ်စိုက်ဖို့ 32GB ထိ စိုက်လို့ရလို့ Default Memory ကို SD ကဒ်ကိုထားပြီး ကြိုက်သလောက်ကူးလို့ရပါတယ် ဖိုက်ဘာ ကော်နဲ့လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲ Metal နဲ့လုပ်ထားလို့ သုံးသူများ ကြိုကမယ်ထင်ပါတယ် CPU အပိုင်းမှာလည်း MTK Chipset ကိုသုံးထားလို့ မပူဘူး အားခံတယ် ဂိမ်းတွေလည်းကောင်းကောင်းဆော့လို့ကောင်းမှာ ကြိမ်းသေမှာပါပဲ Motion တွေလည်းပါတော့ Double Touch ဆိုပါဝါပွင့်တာ C ဆိုဖုန်းပွင့်တာလည်း လုပ်လို့ရတယ်နော် ကျန်တဲ့ကလိစရာတွေလည်းကြံသေးတယ်နော့်
Samsung Galaxy Note5နဲ့သွားတူပါတယ် ရွှေရောင်လား တကယ့်ရွှေအစစ်လိုပါပဲ အပြင်မှာ လူတော်တော်များများကြိုက်ပါတယ် ပုံစံအနေထားကတော့လေး
Pacific P9 Plus Smartphone
Memory : Ram 1 GB/Rom 8 GB MicroSD upto 32 GB
Display : 6" QHD IPS LCD Capacitive 960*540pixels
Simcard :2simcard Support
Network : GSM 2G : 800/900/1800/2100 MHz. WCDMA 3G : 850/2100MHz.
Camera : Front 5.0 MP / Rear 8.0 MP
Operating System : Andorid 6.0 Marshmallow
Communication : Bluetooth/WiFi/Micro USB
Multimedia : FM Tuner/Video-Music Player
Huawei P9 နဲ့လုံးဝသွားတူတာပဲ ဒါပေမယ့်ကိုယ့် Quality နဲ့ကိုယ်ပါပဲ P9 ကတော့ ၅သိန်းခွဲလောက်ရှိတာပေါ့နော် Back Camera 2လုံး Font Camera 1 လုံး စုစုပေါင်း သုံးလုံးပေါ့ ဒီအုပ်စုထဲမှာရောင်းအားအကောင်းဆုံးပါ
ဟန်းဆတ်များကို 1နှစ်အာမခံပေးထားပြီး တစ်လအတွင်းsystem Error ဖြစ်ပါက အလုံးသစ်ပြန်ချိန်းပေးပါသည်။ ။အရည်အသွေးကောင်းပြီး ဈေးနူန်းသက်သာတာ အာမခံချက်ရှိတာ NIPDA ပစွည်းပါ. . .
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ ဆိုင်များ သို့ပစွည်းများကိုလာရောက်ရောင်းချပေးပါသည် ပို့ခမယူပါ ။ ။ ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိသုံးစွဲသူ user များကိုလာရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါသည် မည်သည့်နေရာမဆို ပို့ခမယူပါ
နယ်များတော့ မည်သည့်နေရာမဆိုပေးပို့ပေးပါသည်။ ။ပို့ခမယူပါ။
မြောက်ဒဂုံ၃၅မှတ်တိုင်အနီး " ဆွေသဟာMobile"
( ယခုကြေငြာကို "ဆွေသဟာMobile" မြောက်ဒဂုံမှ ကြေငြာပါသည်)